Keisuke Honda oo aan hubin mustaqbalkiisa kooxda ka dhisan gegida San Siro ee AC Milan xilli ciyaareedka dambe. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Keisuke Honda oo aan hubin mustaqbalkiisa kooxda ka dhisan gegida San Siro ee AC Milan xilli ciyaareedka dambe.
Keisuke Honda oo aan hubin mustaqbalkiisa kooxda ka dhisan gegida San Siro ee AC Milan xilli ciyaareedka dambe.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 10-06-16 1:37 PM Ciyaaryahanka indhayarta ah ee Keisuke Honda ayaa ka dhawaajiyey inuusan hubaashi aheyn mustaqbalkiisa xilli uusan war u heyn hadii uu ka tagayo AC Milan xagaagan iyo hadii uu sii joogayo.
Xidigan u dhashay dalka Japan ayaa kooxda AC Milan kaga soo biiray 2014 kii kooxda reer Russia ee CSKA Moscow waxa uuna dhaliyey kaliya hal gool xilli ciyaareedkan sidoo kale waxa uu caawiye ka noqday sedex gool dhamaan kulamadii niyad jabka uu kala kulmay xilli ciyaareedkii tagay ee 2015/16.
29 Sano jirkan ayey ugu harsan tahay kaliya hal sano qandaraaska uu kula jiro kooxda ka dhisan garoonka San Siro, welina kama uusan helin maamulka kooxda wax qorshe oo qandaraas cusbooneysiin ah.
“Halkan waxaan joogay labo sano iyo bar, balse kuma qanacsani bandhigyada aan kusoo bandhigayo halkan, mana huba in AC Milan ay iisii ogolaan doonto inaan sii jooga halkan iyo in kale, ma huba waqti xaadirkan mustaqbalkeyga” Honda ayaa sidaas u sheegay Sky Sports Italia.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in Honda uu u dhaliyey 10 gool kooxda AC Milan 81 kulan oo uu kasoo muuqday guud ahaan intii uu ku sugnaa kooxdan labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.